सेनालाई राज्यले काम गर्न नदिएको हो भने स्पष्ट हुनुपर्छ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सेनालाई राज्यले काम गर्न नदिएको हो भने स्पष्ट हुनुपर्छ
प्रकाशित मिति : २०७६, २८ मंसिर शनिबार ११:४६
ईण्डियन सत्ताले पहिलो पटक कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ, त्यो पनि ’गोर्खा राईफल्स’का नाममा भर्ती गरिएका नेपालीहरुलाई । देशका नागरिकहरुलाई विदेशीका लागि भाडामा प्रयोग गर्न स्विकृति दिने दलाल नीतिको नतिजा अब देखिंदैछ । नेपालका विरुद्धमा नेपालीहरुलाई लडाउने यो घृणित रणनीतिका बारेमा किन बोल्दैन सरकार, सेना र दलमा बसेका ईण्डियन भरियाहरु ?
नेपाल विरुद्ध नेपालीहरु प्रयोग गर्न पाईन्छ ? विदेशीहरुको यस्तो अपराधमा पनि नबोल्नेहरुलाई नेपाली भन्न सकिन्छ ? एउटा साम्राज्यवादीलाई नीति, नियम, कानून, कुटनीति, नैतिकता, शिष्टाचार केही नचाहिने तर यहाँका कौडीका भरीयाहरुलाई मात्र चाहिने ? सत्ता दलालहरूको कृयाकलापका कारणले यहाँको सेना राजपरिवारको हत्या गर्न र शान्ति मिशनका नाममा विदेशीका लागि लड्न मात्र संगठित गरिएको अर्थ लाग्दैछ ।
राष्ट्रियताको सवालमा सेना फस्दैछ । देशको विष्फोटक परिस्थितिलाई यसले बुझ्न कोशिस गरेको देखिएन । आफूले खेल्नु पर्ने उचित भूमिका नखेल्ने हो भने यसको विघटन हुने कुरा निश्चित छ । विदेशीहरुले दलहरुलाई पनि गैरजिम्मेवार बनाएर अलोकप्रिय बनाउँदै समाप्त पारेका थिए । कसैको अस्तित्व सक्नु भन्दा पहिले त्यसलाई भूमिका विहीन बनाईन्छ ।